The Days are so long..
The Nights are too wrong..
Who took away asleep from my eye
Somebody's tearing is likearhyme
Don't tell me that I can live without you.
Come back as soon as possible to me as I need you.
Miss you.. Miss you.. Miss you...
Ma Ma Thiri (24 December 2011)
Posted by မမသီရိ at 12/25/2011 05:14:00 PM
ခင်ချစ်တာ မှန်ရင်ဖြင့် ..
ရင်ဖွင့်လို့ ကြို ပါ့မယ်....။
၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 12/13/2011 07:00:00 PM
သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ နေရာ မှာ....
အမြဲ မမြဲသော သဘော အရ
တချိန်ကျ အေးစက် သွား မှာ..
ချွဲ ပျစ်ပျစ် ကျိ နေတာတွေ
တချိန်ကျ ခါးသက်ကုန် မှာ..
အဲသလို ချွဲ ကျိကျိ .. သဲသဲ လှုပ်
မောင်.. လိုအပ် နေတာ တွေ..
အဲဒါအဟုတ် သေချာ လို့လား ..
ကျမ ကူးခပ် ဖူးတဲ့
ပင်လယ်က သိမ်မွေ့ လှတယ်
ကျမ လမ်းလျှောက်ဖူးတဲ့ သက်တံ က..
ကျမ ထိုင်ငေးဖူး တဲ့ ကောင်းကင် က
နဖူး ပေါ် လက်တင်..
ဘယ်လို ပင် စဉ်းစား စဉ်းစား..
သဲ သဲ မလှုပ် ချင်တာတော့ အသေအချာ..
ချွဲ ကျိကျိ မကြိုက်တာကတော့ အသေအချာ..
အချစ် နေရာ မှာ
မွန်မွန်မြတ်မြတ် သိမ်း ထုပ်..
ယုယု ယယ ထွေးပွေ့.. ..
သက်ဆိုင်သူ ရောက်လာမဲ့ နေ့ထိ..
စောင့်နေမယ့်သူ တယောက် မောင့်ဥယာဉ် အစွန်အဖျား နားမှာ ပဲ ရှိနေ. ... ။
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 11/30/2011 02:41:00 PM
ကောင်းကင်က အဲသလောက် နက်တယ်လို့
ကျမ ထင် ကို.. မထင်ခဲ့မိရိုး...
ကူးခပ် သွား လာရတာ.. ကျမ နှစ်သက်တယ်..
လမင်း ကို လိုက်.. လိုက်.. ဖမ်း ဖူးတဲ့ ညတွေ...
ငွေ ရောင်.. တံပိုး လွယ်ထားတဲ့.. နုမွမွ တိမ်စိုင် များ...
ရောင်နီကို.. ကြိုရမယ်..မှန်း.. မေ့ ခဲ့ ပြီ ရော..
ဆည်းဆာ အရိပ် ရှည်မျောမျောတွေ ကျမ ချစ်တယ်...
သန်းခေါင်ယံ ..သူ့ ဂစ်တာသံတွေ..
ကျမ နဲ့ တူတူ လိုက်ကြို ပေးတာ ကို.........။
၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 11/27/2011 06:03:00 PM
အလွမ်းအပြည့်နဲ့.. အဲ သည်အိုး..
ငါ.. ဆွဲဖွင့်မိမှာ စိုး..တယ်...။
Posted by မမသီရိ at 11/21/2011 08:47:00 PM
အရည်မရ အဖတ်မရ ကဗျာ
ကြားရ တာတွေ အရည်မရ အဖတ်မရ..
မြင်ရတာတွေ အရည်မရ အဖတ်မရ
အရည်မရ အဖတ်မရ စကား
အရည်မရ အဖတ်မရ .. စာတမ်းများ
အရည်မရ အဖတ်မရ.. လမ်း မထက်မှာ..
လေဖမ်း ငါးချဉ်သုတ် အကြင်နာ
လေပွား လေယား caring
အရည်မရ အဖတ်မရ အချစ်တွေ နဲ့
အရည်မရ အဖတ်မရ အဟုတ်ကြီး မှတ်
အရည် မရ အဖတ်မရ ဟေးလား ၀ါးလား..
အရည်မရ အဖတ် မရ ကုန်လွန်သွား မှာ သိနေရက်..
အရည်မရ အဖတ်မရ အချိန်တွေ ဖြုန်း
အရည်မရ မဖတ်မရ.. လပ်လျား လပ်လျား
ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စား .. လူတကာ မျက်စိစပါးမွေး စူးအောင် လမ်းသလား
ဟီရိ နဲ့ သြတ္တပ အရည်မရ အဖတ်မရ ဖြစ်သွား
တွေးနေမိတာကိုက အရည်မရ အဖတ် မရ ပါလား..
ငါ့ အရည်မရ အဖတ်မရ .. ကဗျာ...
၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 11/16/2011 12:21:00 PM
လေထဲ မှာ လွင့်မျောခဲ့..
ကိုသန်းလှိုင် ရဲ့ ခံစားချက်..
လွမ်းအသက်.. တမ်း လျှက် ဆိုနေ...
အေးမြတဲ့ အတိတ်.. နိမိတ်ပုံ ဒီဆောင်း...
အချစ် ကိုင်း အချစ်ပင် အစ ပျိုး
အချစ်မိုး စွေ.. အချစ်တွေ ဆတိုး..
အချစ်သာတစ် ဘ၀.. နှလုံးသား အလှ... စချစ်ခဲ့ကြ...
ခုလို.. အေးမြမြ.. ဟေမန္တ ... ဒီလို ဆောင်း အစ မှာ မဟုတ်လား...
နှင်းရည်စိုလူး.. ရာသီ ဦး မှာ..
ဖူးပုရစ်ချီ .. ဝေစည် သီခဲ့...
ပန်းတွေ ရဲ့ ဘုရင်မ.. ပင်မြင့်စံ.. သဇင်အလှ..
မောင်............ ကျမ ကို
အဲဒိ ရနံ့ ကလေး...
ရင်ထဲ မှာ .. မွှေး နေဆဲ ပါ .. မောင်....
ဟော... ခု.. တစ်ခါ... တစ်ဆောင်း သစ်လာတော့..
အချစ်သဇင်.. ကျမ ပန်ချင်သေးတယ်....
မိန်းကလေး သဘာဝ.. ပန်း ကြိုက်တတ် ပါရဲ့..
ဒါပေမဲ့.. မောင် .. ရေ..
သဇင်.. ဆို.. သဇင်မှ.. ပါ ပဲ ကွယ်....
နှင်းနုလွှာ ခြုံဆိုင်း.. ချစ်စရာ...ဆောင်း အရိုင်း တစ်ခု
မောင်.. နဲ့... ခဏ ဝေး... ကာလကလေး ကြုံ တုန်းကပေါ့..
နှလုံးသား ကြွေ ပြုန်းမတတ်..
အလွမ်း .. ညတွေ.. ရှည်ခဲံ့ လိုက်တာများ... ဆို...
မဲဇာ ကို.. ရောက်ခဲ့ ရသလိုမျိုး...
ဒွေးချိုး ကလေး တွေ.. လေးချိုး ကလေးတွေ...
ကဗျာ ပန်းပွင့်.. ကာရံ ဆင့်ချွေ....
အလွမ်းကလေး တွေ..မောင့်.. ရဲ့ ရှေ့ မှောက်...
တောင်ပံ ပေါက်လို့ ..ရောက်ခဲ့ ဖူးတာ.. နော်....
နှင်းသိပ် တိုး ကြွေ...ပြည့်နေတဲ့ လ.. ၀င်းပ ပ လှ..
ဒီ ဆောင်းကာလ.. လပြည့် ည တစ်ခု မှာပဲ ပေါ့..
မောင်... မှတ်မိ ရဲ့လား...
ရွှန်းလဲ့ တောက်တောက်.. လ.. ရောင် အောက်မှာ...
နှင်းတွေ စို လက်..မြက်ခင်း ထက်မှာ..
လက်ချင်း တွဲ ယှက်.. ချစ်တဲ့ အကြောင်း
အပ်ကြောင်း ထပ်ထပ်.. လုပြောခဲ့ ကြ ... မေတ္တာခြုံ
မောင့် ရင်ငွေ့ လှုံ.. လုံလိုက် ပုံ များ..
အသဲကလေး တွေ အရည်ပျော်..
အလွမ်း နဲ့ အမုန်း.. ဘယ်မှာ. ပုန်းနေသလဲ..
အဲဒီ တုန်း က.. ကျမ သိပ်ပျော်ခဲ့ တာပဲ ကွယ်...
ဝေ့ ၀ဲ လာတဲ့ အသံ...
မှုံ ပြာရီ... ရာသီတွေ.. ပြောင်း.... တစ်ဆောင်း သစ်ပြန်ပြီ....... တဲ့..
အဲဒိအဆိုတော် ကလေး.. လွမ်း လို့ ငို နေ...
ကျ မတော့.. မောင့် အချစ် နဲ့ ..ပျော်နေ......။
(edited on 13.11.2011)
Posted by မမသီရိ at 11/13/2011 11:47:00 AM
ညီမလေး ရဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အလွမ်းတွေ
ညီမလေး ရဲ့ စပယ်ရုံတောင် မပွဲသေး
ဆောင်း က အပြေးကလေး လာခဲ့ပြီ..
နှင်း နှမ သူဇာ... ပုဝါ ကဖြင့် ပါးဆဲ....
ဖိတ်လျှံကျလာနေ တဲ့.. မြောက်လေအေး
အဲဒီလရောင် ကို ၀တ်ရုံချုပ် ..
ကြယ်စင်တွေ ဆံထိုး လုပ်ချင် တယ် .. ကိုကို..
နှင်းမှုန်တဲ့ ညခင်းတွေ ညီမလေး သိပ် ချစ်တယ်.
.ညီမလေး ဆံပင်တွေ ကိုကို.. သပ်တင်ပေးပါ..
ညီမလေး စံပါယ်ကုံး.. .. ကိုကို ထုံးပေးပါ..
နှင်းတွေ သိပ်မသဲ ခင်မှာ
ပြတင်းဘေး နား သစ်ပင်က ရှဉ့်ညိုကလေးပေါ့
သူ ခဏခဏ ခိုး ကြည့်တယ်..
ကိုကို လာ.. ဖမ်းပေးပါ လား.. ညီမလေး တစ်ချက် လောက် ပွေ့ထားချင်
တောင်ကမူ အဆုံးမှာ... ရေစီးသံ ညင်သာလာတဲ့ စမ်းချောင်းကလေး
ညီမလေး ဆင်းကြည့်တော့.. ခြေထောက်ကလေးတွေ အေးစိမ့်
ကြည်ကြည်နူးနူး နှစ်သိမ့်.. အဲဒိ ရေသွင်သွင်ထဲ.. ကိုကို့ အချစ်တွေ
ကိုကို့ အတွက် လက်အိတ်ကလေး ထိုးနေတယ်..
ဆောင်းအလယ် မတိုင်ခင်တော့ ပြီးတန်ကောင်းလေ ရဲ့..
မျက်လုံး ပြူးကလေး နဲ့ လှောင် လှောင် ကြည့်
ဒီ ကောင်.. တခုခု ကို သိနေသလို..
(ညီမလေး ကိုကို့ ကို ချစ်နေတဲ့ အကြောင်း..)
သူ့ ကို ပွေ့ထား ရုံ နဲ့ အလွမ်း မပြေပါ.. ကိုကို..
ဒီဆောင်းအမှီ.. ပန်ချီကား တချပ်..
ကိုကို့ ပါးနား ကပ်.. တိုးတိုးရှပ်ရှပ် ကလေး ပြောမယ့်စကား..ရှိနေ..
ကိုကို.. အရောက်လာခဲ့ပါတော့လား.. ချစ်တဲ့ ညီမလေး.. ဆီ...
(ညီမလေး.. အတွက်.. )
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 10/30/2011 01:33:00 PM
မေမေ ဖုတ်လေ့ ရှိတဲ့
ဆောင်းဦးအကြို ကိတ်မုန့် ရနံ့ က နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတယ်...
အညိုရောင်စပျစ် ခြောက် လေး တလုံးနှစ်လုံး
ကျမ ကိုယ်တိုင် တိုက်ထားတဲ့ သစ်သား ကြမ်းခင်း ပြောင်လက်လက်မှာ..
သူ့ မျက်နှာ ပေါ် ပေါ်လာ တယ် မေမေ
စာကျက်ရတာလဲ စိတ်က တယ် မဖြောင့်ချင်ဘူး..
အိမ်ရှေ့ဥယျာဉ် ပိစိ ကလေးမှာ.. နှင်းဆီပန်းဝါ၀ါ တွေ ဖူးနေကြတယ်..
စာကလေး ပိစိ နှစ်ကောင်လဲ ခဏခဏ အလည် ရောက်တာပေါ့..
ကော်ဖီ ကျဆိမ့် လေးက တောင်.. လွမ်းတဲ့ ရနံ့တွေ ထွက်နေတော့..
..ကျမ ဘာလုပ်ရမလဲ မေမေ ရယ်...
ကောင်လေးတွေ ရီးစား များတာ.. သူတို့ တော်လို့ တဲ့...
ကောင်မလေးတွေ လွမ်း တတ်တာ.. အသုံး မကျ လို့ ဆိုပဲ...
မေမေ့ သမီး ရှပ်တေးမ လေ...
ရှပ်ပျာ .. ရှပ်ပျာနဲ့..
ဒီ အသက် အရွယ် မကြီး မငယ် မှာ.မှ....
၀ိုင်နီ ပုလင်း ကလေး တလုံး လွတ်ကျ ခွဲလိုက်ပြန်တယ်....
မစိုး ရိမ်ပါနဲ့ မေမေ
ကော်ဖီ ညိုညို ပဲ စွဲ လမ်းခဲ့တာမို့.. ၀ိုင် နီချိုတာတွေ မသိချင်တော့ပါဘူး..
သူ့ဖာ သာ မွှေး .. တာ.. မွှေး ချင်သလောက်သာ မွှေး ပါစေ...
Posted by မမသီရိ at 10/22/2011 06:16:00 PM
ကျမ ညတွေ သူ ကျူးကျော်ခဲ့တယ်..
ကျမ နန်းမြို့ သူမို့ သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်...
နူးညံ့သော လက်ကလေး တစုံနဲ့..
ရင်ခုန်ခြင်း.. တီးဝိုင်း တစုံ နဲ့...
စစ်အင်္ဂါ လေးပါး ပြည့်စုံစွာ.. ချီတက်လာခဲ့သူ..
ကျမ စိတ်ကောက် ခြေဆောင့်တာလဲ မငြူစူ..
ကျမ နှုတ်ခမ်းထော် ရန်ထောင်တာလဲ.. ကြည်ဖြူ..
ခဲလုံးတွေ ပိတ်ကန်.. တံခါး ဆောင့်ပိတ်တာလဲ.. အပြုံးမပျက်တဲ့သူ..
ဂရုဏာ.. အကြင်နာ.. မြတ်နိုးတာ..ခွင့်လွှတ်တာ
အဲဒီ အကူ တပ်တွေ ကြောင့်ပဲ..
ကျမ အင်ပါယာ ထဲ... သူခွဲဖောက်.. တိုးဝင်း ကျူးကျော်လို့...
ချစ်ခြင်း ကို... ချဉ်ခြင်း တပ်ဖို့.. စိုးရွံ့ နေခဲ့တဲ့သူ..
လက်မြှောက်အရှုံးပေးဖို့ ကိုလဲ.. မတွေးလို...
ဘ၀.. ကလေး တွေ ဒီလောက် တို နေတဲ့ဟာ.. ချိုရုံကလေးပဲ ဆက်နေချင်လို့..
ကျမ စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေ စုဆောင်းခဲ့တယ်..သူ့ကို ပုန်ကန်ဖို့..
ကျမ ဥပေက္ခာ စွမ်းအား တွေ စုစည်း..
မေ့လျော့ နိုင်ခြင်း တွေ တိုးပွားအောင် .. စွမ်းဆောင်...
အလံဖြူ တကယ်မတင်ချင်... ပုန်ကန်သူ ပဲ ဖြစ်ပါရစေတော့ ရှင်.......။
Posted by မမသီရိ at 10/20/2011 06:33:00 PM
နီးနီးဝေးဝေး.. စိတ်မလေး ပဲ...
ချစ်မိတဲ့နောက်.. ခရီးဆုံးလျှောက်မှာမို့ ..
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 10/14/2011 06:31:00 PM
လွမ်းတာကို လွမ်းတယ် ပြောတာ
ကိုယ့်ဖာ သာ လွမ်းချင်လို့ လွမ်းတဲ့ဟာ..
မင်း မကျေနပ် ရင် ပြန်လွမ်း လိုက်..
ဝေး.. ချစ်တာကို ချစ်တယ်လို့ ပြောမယ်
မင်း မကျေနပ်ရင် ပြန်ချစ်ပေါ့..
နှလုံးသား ကလေး တစုံ ပါလာလို့
လွမ်းတယ် ကွာ.. .ဘာဖြစ်သေးလဲ..
နှလုံးသား ကလေး တစုံ ပါလာ လို့
ချစ်တယ် ကွာ .. ဘာဖြစ်သေး လဲ....
ချစ်လို့ ကြည့် ကြည့် နေခဲ့တာ..
ဟို အော်.. ဒီအော် လျှောက် အော် မနေနဲ့..
ရာသီ တွေ သယ် ဆောင် သွား တဲ့.. သံယောဇဉ် .. ပန်းခြင်းများ...
မင်း... တကယ် မကျေနပ်ဖူးလား...
လာပါ.. အချိန်မရွေး ပြန်ကောက်.. ချစ်လှည့်......။
Posted by မမသီရိ at 10/11/2011 07:31:00 PM
လ နဲ့သွန်းတော့လဲ အလွမ်း
မိုးတွေ ရွာတော့လဲ.. တကယ်ပဲ မစဲ နိုင်တော့ဘူး
ချစ်ခြင်းဖြင့် မအားးနိုင်အောင်...အဲဒီ အလွမ်းပေါ့..
အဲဒီ အလွမ်းတွေ ပါပဲ....သွန်းလိုက်မိသမျှမှာ။
Posted by မမသီရိ at 10/06/2011 06:09:00 AM
ချစ်ကြတဲ့သူတွေ ထိုင်.. ထိုင်ငေးရတာ.. အရသာ..
ရပ်ကွက်ထဲမှာ.. ဟိုမှာ.. ဒီမှာ..
ရင်မှာ ကြည်နူးစွာ.. ... မုဒိတာ....
သူက... သူ့ မိန်းကလေးအတွက်...
သစ်ခွတွေ စိုက်ထား ပေးသတဲ့...
သူက သူ့ မိန်းကလေး ကို..
သူက သူ့ မိန်းကလေးအတွက်.. သီချင်းတွေဆိုပြသတဲ့..
သူက... သူ့ မိန်းကလေး ကို...
ခေါင်းလျှော် ဖွဖွ သုတ်.. ဆီမွှေး ထည့်ပေးချင်သတဲ့...
သူက.. သူ့မိန်းကလေးအကြောင်း ကဗျာတွေလဲ..ရေး သတဲ့...
သူက.. သူ့ မိန်းကလေး ဘယ်လို ချစ်ရကြောင်း
အရာအားလုံး ထက် ကိုချစ်တယ်..
အချိန်တိုင်းမှာ ချစ်တယ်...မင်း နဲ့ပဲ မခွဲပဲ နေမယ်.....
အိုး... စကားလုံးတွေ တိုင်းမှာ.. အင်တွေ အားတွေ.. ပြည့်လို့...
မင်း မချစ်ရင်.. သေမတဲ့..
မင်း မုန်းသွား ရင်.. ရင်ကွဲ မတဲ့..
မင်း မရှိတဲ့ဘ၀မှာ.. အရာရာ ဟင်းလင်းဟာလာ...
ငါ့ ကို ပြန်ချစ်ပါ...
နားပူနားဆား လုပ်မိတာ... . ချစ်လွန်းလို့ပါ....။
အဲဒါ သူ ချစ်တဲ့ အသံတွေ...
မိန်းကလေးက မချစ်ဖူး ထင်တဲ့အခါ...
စိတ်ဓါတ်ကျနေပုံ ကလေး ကိုက...
အချစ်တွေ နဲ့ မို့ ကြည်နူးဖွယ်ရာ....
မုန်းတာနဲ့ စာ.. ချစ်တာပဲ ကောင်းတာမို့....
ချစ်သာ. ချစ်ပါ.. ချစ်လိုက်ပါ... ချစ်ကြပါ....
တို့ များ ရင်မှာ.. မုဒိတာ..........။
၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 10/01/2011 03:31:00 PM
ဒီနေ့တော့ မြစ် တစင်း အကြောင်း
ပြန်ပြောင်းပြောကြတာပေါ့ မြစ်ကလေး ရေ..
မာယာ ရှိတယ် ဆိုတာ မြစ်တွေ မှာပဲ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း
အဲဒီ မြစ် က ခဏခဏ အန် အန်ချ လို့ ပြ တတ်ခဲ့ သတဲ့..
လေပြေတွေ သူ့ အပေါ် က ဖြတ်သန်းခွင့်ပေးတဲ့အခါ
လတ်ဆတ် မှု တွေကိုလဲ သူမျှဝေပေးခဲ့တာမို့
တို့တတွေ အကုန်လုံး က အဲဒီ မြစ် ကို အချစ်ဆုံးချစ်ခဲ့ ဖူးကြတယ်..
တောင်ကြားတွေဆီ သူစီး ဆင်း သွားပုံကလေး ..
ခင်တွယ်သူတွေ တပုံ တပင် နဲ့.. သူ့ ရင်ခွင်မှာ မြူးတူးပျော်ပါး..
လူတိုင်းနီးပါး.. ကြည်နူးခွင့် ရခဲ့ကြဖူးတယ်...
စိမ်းလန်းစိုပြေနေသော.. မြစ်ကမ်းပါး သစ်ပင်များ..
လွတ်လပ်ပေါ့ပါး.... လယ်ကွင်းကျယ် လွင့်လွင့်များ....
စုန်စုန် ဆန်ဆန်... အပြန်အလှန် ကူးခပ် သွားလာနေသော..
လူများ ..လှေများ... ငှက်သဗ္မာန်များ... သူ့ ရင်ခွင် အတွင်း မှာ...
သူ့ အပြုံးများ ဟာ.. ရတနာ တပါး.. ရှည်လျားလျား.. သူ့သွင် သဏ္ဍန်
ကဗျာဆန်.. မဟာ ဆန် လှ သူမို့... ရာဇ၀င်အဆက်ဆက်..
ပြိုင်ဖက်မဲ့ သတို့သမီး... ရှုမငြီး ဖွယ်.. လူတွေရဲ့ နှလုံး အလယ်.. သူ နယ်ပယ်ချဲ့ပုံများ.....
ငါတို့ ချစ်နေဆဲပါ.. မြစ်ကလေး ရေ....
လောလော ဆယ်ဆယ် တော့.. မင်း ကျန်းမာရေး.. မင်း ဂရုစိုက်ပါ မြစ်ကလေး....
ဆောင်းခို ငှက် တွေ မင်း ဆီ ရောက်လာတဲ့အခါ.. မင်း ငိုကြွေးသံ တွေ
တိုးတိုး တိတ်တိတ်လဲ.. မရှိုက်ပါ နဲ့လား မြစ်ကလေးရေ...
မိုးနှောင်း လေပြေနဲ့.. မင်း ပျော်ရွှင်ပါ မြစ်ကလေး...
ကြိုးကြာ တေးသံ နဲ့.. မင်းကြံ့ခိုင်ပါ မြစ်ကလေး...
ရွှေရောင် သဲသောင် မွမွ နဲ့.. မင်း.. တက်ကြွပါ မြစ်ကလေး..
အစိမ်း ရောင်.. ကိုင်းတော များနဲ့... မင်း အသက်ဆက်ပါ မြစ်ကလေး....
မင်း ရဲ့.. အနာဂတ် အရေး... ငါတို့ အနာဂတ်ပါ ပဲ မြစ်ကလေး.......။
Posted by မမသီရိ at 9/23/2011 06:24:00 PM
Labels: ကဗျာ, နှစ်သက်မိသောသီချင်းများ
အပွေး မြင်ရင် အပင် တော့ သိဖို့ကောင်းတာပေါ့
အဲသလောက် ထိ မအ ပါနဲ့လား ချစ်သူ ကောင်ကလေး ရေ..
နှင်းတွေ ဝေရုံနဲ့ ဆောင်း ဖြစ်ရရောလား
မြူတွေ ဆိုင်းရုံနဲ့ နွေ ဖြစ်ရရောတဲ့လား
မိုးတိမ်တွေ မှောင်ရုံနဲ့ မိုး ဖြစ်ရရော တဲ့လား..
မင်း ကို မခေါ်တာနဲ့ ကျမ က မုန်းရရောတဲ့လား..
ကော်ဖီကို တနေ့ ၃ ခွက် ဆက် သောက် နေဆဲ ပါ ကောင်လေး...
လသာတဲ့ ညတွေ မှာ မင်း ကို လွမ်းနေဆဲပါ ကောင်လေး ရေ
လမိုက်တဲ့ ညတွေ မှာ မင်း ကို တမ်းတနေဆဲပါ ကောင်ကလေး ရေ
လေပြေလာရင်လဲ မင်း ပဲ အတွေးထဲ ရောက်လာဆဲပါ ကောင်လေး ရေ..
ကြယ်ကြွေ ရင် လဲ .. မင်း အတွက် ဆုတောင်းဆဲ ပါကောင်လေးရေ..
အမှောင်တွေ.. စဲ ပါစေတော့လား.. စေ့ရုံ စေ့ထားခဲ့သော တံခါးများ..
တွန်းဖွင့် ထွက်ခွာ ဒီသတ္တကမ္ဘာ လောက ကို မြည်းစမ်းဖို့.... မင်း ကို.. ချစ်နေဆဲ ပါ ကောင်ကလေး..။
၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 9/21/2011 04:48:00 PM
Posted by မမသီရိ at 9/20/2011 09:12:00 AM
အလွမ်းနံ့သာများဖြင့် .. ပေကျံနေသော နံနက်ခင်း...
သခင့် ပန်းခြံအတွင်းမှာတော့ အရာအားလုံး တိတ်ဆတ်ငြိမ်သက်..
သစ်ရွက် သဲ့သဲ့ လှုပ်သံ မကြား ရတာကို က လွမ်းချင့်စဖွယ်...
အိတွဲ့တွဲ့ ပါးလှပ်လှပ်.. ခန်းဆီးရင်း စားပွဲပေါ်က ကော်ဖီ နှစ်ခွက်..
နှစ်သက်စဖွယ် ရနံ့ဝေနေပေမဲ့ တခွက်က ပိုင်ရှင်မဲ့နေ..
မြူတွေဆိုင်းနေသော တောင်စဉ်တန်းတွေရဲ့ အနောက်မှာ..
ရှိမယ် ဆိုတာ မသေချာသော.. အစစ်အမှန်ချစ်ခြင်းတရား..
မေတ္တာ အားဖြင့်သာ . ပြုစု ပျိုးထောင်ထားခဲ့သော .
လာဗင်ဒါ အပြာများ အကြား....
နှင်ထုတ် လို့ မရနိုင်အားတဲ့.. တမ်းတခြင်း စိတ်တွေ..
သူ့ပုခုံးကလေး မှီတွယ်ခွင့်တခုကိုပဲ.. ရူးသွပ်အိပ်မက်လို့..
ကိုယ့်ပုခုံးကလေး သူဖက်ထားဖို့.ကတော့ အပိုဆုကလေး တခု....
တွယ်ငင်ရစ်ပတ်.. အဖြတ်ခက်သော နွယ်.. အရွယ် ၃ ပါး ဘောင်အတွင်း..
အချစ်သည်သာ.. အရာရာ ဆိုတဲ့အကြောင်းတရား.အဟောင်း.
တနေ့ ပြောင်း သွားတိုင်း တခါ... ပိုလို့ ပိုလို့ သေချာ.. လာ...။
၂၃ သြဂုတ် ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 9/15/2011 11:59:00 AM
Posted by မမသီရိ at 9/10/2011 01:14:00 PM
တကယ် အဆင်မပြေဘူး ရှင် ရယ်...
စက်တင်ဘာမိုးက.. သဲသဲမဲမဲ စွေ နေတယ်..
ကမ္ဘာချီ မှိုင်းလို့ ညို့..
မုတ်သုန် အနှောင်း.. လေတွေကလဲ.. ထန် လိုက်တာ သဲသဲ..
သစ်ရွက် အဟောင်းတွေ တောင် မက..
သစ်ရွက်အသစ်တွေပါ လိုက်ကြွေ.. သဲသဲ..
ကသောကမျော.. ပြည့်လျှံလာတဲ့.. ဒီရေတွေ နဲ့..
ပတ်ပတ်လည် .. ပင်လယ် ကလေး တခု လို ၀ိုင်းလို့...
ကျမ မျက်နှာမူထားတဲ့ ဖက်မှာ...
တောင်တန်း ညိုညို တွေ ရှိနေတယ်..
ကျမမုန်းလိုက်တာ.. လေလာလာ မိုးလာလာ
သူတို့ ရဲ့ ကြံ့ကြံ့ ခံ စိတ်ဓါတ်..
ပြူတင်းဘောင်ကလေး.. လက်ထောက် လွမ်းရ..
ခန်းဆီးစ ကလေး ကိုင် .ကိုင်.. . လွမ်း ရ..
ပန်း ၀ါဝါ ကလေး တွေ ကြည့် လွမ်း ရ..
စာဗူးတောင်း သိုက် တွဲလောင်းကလေးတွေ ငေး လွမ်း ရ...
စံကား ပွင့် အကြွေတွေ မွှေး လွမ်း ရ..
တောက်တောက် ပြေးဆော့ ပူစီကလေး တွေ့တော့လဲ လွမ်းရ..
မိုးသံ လေသံကြားက စိုးစိုးစီစီ.. ညံ ချင်တဲ့ ငှက်ကလေး အသံကြား လွမ်းရ..
ပန်း ခရမ်း ပြာ.. သစ်ခွ အိုးကလေး နဲ့ လွမ်းရ...
တကယ်ကို.. အဆင်မပြေဘူး ရှင် ရယ်...........။
Posted by မမသီရိ at 9/07/2011 11:00:00 AM
အားဆေး မသောက်ရသေးပဲ ..
လတ်ဆတ်တဲ့ လေပြေရနံ့ ရနေတယ်..
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရတာထက် ကို
ချစ်သူ့စကား တခွန်း ..
အင်အားတွေ ဖြစ်ထွန်းစေလိုက်ပုံက ..
ကိုယ်တွေ့သာ မဟုတ်ရင်.. မယုံချင်စရာ...။
Posted by မမသီရိ at 9/04/2011 05:10:00 PM
မီ... သို့မဟုတ် ... နွေးထွေး လင်းလက်ခြင်းများစွာ...
ငါကြေကွဲတဲ့အခါ ဘေးက မင်း ဖေးမဖို့
နင်ကြေကွဲနေတဲ့အခါ ငါ က မင်းကိုထွေးပွေဖို့
ငါပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါ ဘေးက မင်း လိုက်ပြုံးဖို့
နင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါ ဘေးက ငါ ရီမောဖို့..
တို့တွေ တာဝန်ကိုယ်စီ ယူကြမယ်လေ
ငါ အားရှိသွားပြီ .. မီ....
မင်း ပျော်ရဲ့ မဟုတ်လား
ခုတော့ မင်း ပို ပြီး သိလာရတော့မှာ....
မင်း ... အကြင်နာတွေ .
အပို မရှိ..ငါ့အချစ်တွေကလဲ မင်းအပေါ် သာ...
မီ .. မင်း ကို ချစ်တယ်..
ကိုယ် ပေးဆပ်နိုင်တာတွေ အကုန်လုံး .. မင်း ပိုင်တယ်.. မီ..
ကိုယ့်ဘ၀ ရဲ့ အနာဂတ်တခုလုံး .. မင်း ဥယာဉ်ထဲ စိုက်ပျိုးထားလိုက်ပြီ .....
ရေလောင်းပေါင်းသင်.. မင်း ရင်ခွင် နဲ့ နွေး စေဖို့ရာ.. မီ စဉ်းစား ပါ မီ...
မီ... ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မီ...
ကိုယ့် အလွမ်း ကဗျာတွေ အတွက်တော့ နားလည်.စေချင်သည်..... ။
ကဗျာဆရာ မောင်ငယ်တယောက်အတွက်. ကိုယ်စား ရေးဖွဲ့ ပါသည်..။
Posted by မမသီရိ at 9/02/2011 05:01:00 PM
တခါ တုန်းက.. သူ ပြောခဲ့ဖူးတာ...
ကိုယ် အမှန် ချစ်တဲ့ သူ က ..ကိုယ့်ကို ပြန်မချစ်နိုင်
ကိုယ် အမှန် မချစ်သူ ကျတော့ .. ကိုယ့် ကို နှစ်သက်မြတ်နိုး
အတန်တန် .. အထပ်ထပ် စွေသော မေတ္တာချောင်းရိုးကလေး မှာ..
လောကကြီး ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် ဖြစ်တာ..
သူ.... မျက်ရည် အခါခါ ၀ဲ ရကြောင်း ..
အပ် ကြောင်းထပ်စွာ... ထပ်ခါ ထပ်ခါ.. ပြောလာပြီးတဲ့နောက်..
တကယ် မချစ်နိုင်မှန်း သိနေမှတော့..
သဉ္ဖာ စက်ပေါ် မျှော်လင့်ရင်း မျှော်နေခဲ့.. တပြည်သူ မင်းသမီးကလေး လေ...
ကြယ်အကြွေ စောင့်စရာ မလိုတော့..
လ.. အသာ စောင့်စရာ မလိုတော့..
သူ့ အပြာ ရောင်ခန်းဆီးကလေး.. ခိုးကြည့်စရာ မလိုတော့..
သူ့ မှန်အိမ် စိမ်းစိမ်း လေး မျှော်စရာ မလိုတော့..
ဘာသား နဲ့ ထုထား လို့လဲ ကွယ်....
ချစ်ခဲဖူးပါပြီ.. စံတင်လောက်တဲ့ ထိ..
လျှောက်ခဲ့ဖူးပါပြီ.. ဟိုး... ရောက်နိုင်တဲ့.. အနား ထိ...
အဲဒီ လမ်းကလေး အဆုံး မှာတော့....
တို့တွေ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတာ... အတိတ်မှာသာ........။
၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 9/01/2011 04:07:00 PM
နီခြင်း ဝေးခြင်း ပညတ်များ
တမိုးအောက် အတူ ရှိ
အဲဒီ နှစ်ယောက် ဟာ...
ချစ်သူတွေ ရဲ့ ကြား
တံခါး ဆိုတာ မရှိအပ်ဖူးလေ..
မင်း ရဲ့ နှလုံးသား
တို့တွေ မဝေး.. အနီးလေးမှာ...
စကားတွေ လဲ မလို..
အပို တွေ ဘာလုပ်မလဲ..
မင်း ရင်ထဲ .. အချစ်ပဲ ရှိဖို့ လိုတာပါ.....။
Posted by မမသီရိ at 8/28/2011 03:30:00 PM
အချစ်က အချစ် ကြိုက်သလို နေ
မင်း.... ခြုံချင်ခြုံ.. မခြုံချင်လဲနေပေါ့..
ကျမ ကတော့ ရှင့်စောင် ကလေး အဖြစ်.. အမြဲ နွေးထွးစေမှာ..
မင်း.. သီချင်သီ... မသီချင်လဲနေပေါ့..
ကျမကတော့ ရှင့်ပုလဲလုံးကလေးတွေအတွက်.. အမြဲ ငိုပေးနေမှာ...
မင်း.. ကောက်ချင်ကောက်.. မကောက်ချင်လဲ နေပေါ့...
ကျမကတော့ ရှင့် ရွဲလုံးကလေးတွေ အတွက်..အမြဲရီပေးနေမှာ..
မင်း... ဆို ချင်ဆို.. မဆိုချင်လဲ နေပေါ့...
ကျမ ကတော့.. ရှင့် အတွက် သီချင်းကလေးတွေ အမြဲ ရေးပေးနေမှာ..
မင်း.. လာချင်လာ... မလာချင်လဲ နေပေါ့...
ကျမ ကတော့ ရှင့် နေကြာပန်းကလေး အဖြစ်.. အမြစ်စွဲ စောင့်နေမှာ...
မင်း ခေါ်ချင်ခေါ်.. မခေါ်ချင်လဲ နေပေါ့...
ကျမကတော့ ရှင့် အရိပ်ကလေး အဖြစ်.. နောက်က လိုက်နေမှာ...
မင်း ရောက်ချင်ရောက် မရောက်ချင်လဲ နေပေါ့..
ကျမ ကတော့.. ရှင့်အတွက် ကော်ဖီ တခွက် ကျမသောက်တိုင်း ထည့်ဖျော်မှာ..
မင်း သတိရချင် ရ မရ ချင်လဲ နေပေါ့..
ကျမ ကတော့.. စက္ကန့် နဲ့ အမျှ.. ရှင့် ကို လွမ်းနေမှာ...
မင်း ယုံချင်လဲ.ယုံ .. မယုံချင်လဲ နေပေါ့.....
ကျမကတော့ ရှင့် မိန်းကလေး အဖြစ်.. တသက်လုံးပဲ နေသွား မှာ....အသေအချာ.။
၂၀ သြဂုတ်. ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 8/25/2011 07:38:00 PM
သန်းခေါင်အပြင်.. နက်စရာ ညက ရှိနေသေးလို့လား...
ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ခရီးတာ ..ရှည် သလောက် ရှည်ခဲ့ပြီးပြီ လေ..
မုန်တိုင်းသင့် ချောက်ချားဖွယ်.. ညနေခင်းများစွာ..
အရိုင်းဆန်သော.. မနှစ်မြို့ဖွယ် ညပေါင်း များစွာ..
ချွေးပြိုက်ပြိုက် ကျ နွမ်းလျ နံနက်ခင်းများစွာ..
မနိုင်ရင်ကန်.. ရုန်းကန် အထီးကျန် ခဲ့ရသော နေ့လည်နေ့ခင်းများစွာ..
အခိုက်အတန့်ငယ်ကလေးများ ..ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ မှတ်တိုင်ကလေးတွေ..လည်းပါ ..
သူ က ရေဆန်ကို အပြန်ကူးတက်ခဲ့ရတဲ့
လေးလံသော ၀န်တွေပိနေတဲ့ ငါးကလေး တစ်ကောင်သာ..
ဦးစွာ ထွေးပွေ့ပြုစုမှု ရယူ ကျောခိုင်းထွက်သွားသူ
ခရီး.. ယာယီ အိပ်မက်ထဲက အဖော်အပေါင်းကလေး ကို
စိတ်တို ငြိုငြင် အပြစ်တင်လို့
အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် ကြေကွဲသင့်တယ် မဟုတ်လား...
နေရာလွတ်နေတဲ့ ဘေး ကို ခဏခဏ လှည့်ကြည့်ရင်း
အလွမ်းလို့ မဆိုသာ တဲ့ သတိရ မိတဲ့ စိတ်ကလေး နဲ့
အလွမ်းတွေ ပျိုးကြည့်မလို့ ကြိုးစားကြည့်ခဲ့သေးတယ်..
အတ္တဖျက်ပိုးကလေးတွေ ခေါင်းတထောင်ထောင် နဲ့ မို့..
အတိတ် ဆိုတာ အတိတ်သာပါပဲလို့.. ဂျစ်ကန်ကန် ရေရွတ်မိသူကို..
သေချာရဲ့လား .. သနားသလို ငုံ့ကြည့်လာတဲ့ လ.. တစင်း..
စိတ်အလျဉ်း တယ် မသင့်ချင်ဘူး..
မျက်စောင်း တချက် ၀င့်.. မျက်ခုံး တဖက် ဘုတော ပင့် ကြည့်မိတော့
ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး နဲ့.. အဲဒီ လမင်း ရယ်လေ...
တိမ် အညိုတွေ အနောက် ..ခိုး.. ခိုး.. တိုး ၀င်သွားလေ ရဲ့....။
Posted by မမသီရိ at 8/22/2011 02:31:00 PM
အဲဒိ တယောက် အနားမှာပေါ့
ပလူးပလဲ ပြူးပြဲနေတဲ့ နီနီ ရဲ ရဲ ကောင်မလေးတွေ
တအိအိ ငြိချင်စရာ ကောင်းအောင် ချွဲ နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ..
ဟို ပေါ် ဒီပေါ် .. ဖော်ပြ ချင်နေကြနေတဲ့ ချောချောလှလှ မမ လေး တွေ
ကဲ.. ဆို သူ ကိုယ်တိုင်က .. လဲ ပြနေတာ ကိုး...
အချိန်က လဲ အား .. အား နိုင်ကြ လွန်း...
စိတ်ထဲ မယ် ဘ၀င်မကျ..
နီးနီး နားနား ဆို လဲ ဗိုက် ခေါက်ကလေး ဆွဲ လိမ်မိတော့မှာ..
ရေ တခွက် ပြေးသောက်..
နေအုံး... တခြား စာမျက်နှာ တခု.. ဆက်လှန်..
အဆင်က တယ်.. မပြေချင့်....
သ၀န်တို လိုက်ရမလား စဉ်းစား ကြည့်လိုက်သေး..
ခပ်ဝေးဝေး နေတာပဲ ကောင်းမယ် ထင်လို့..
ခပ်ရို့ ရို့ ကုပ်ကုပ် ကလေး လှည့်ပြန်ခဲ့....
အဲဒါ.. ကိုယ် ကျွမ်းကျင် တဲ့ နယ်မြေမှ မဟုတ်ပဲ ကို....
၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 8/18/2011 01:52:00 PM
ညီမျှခြင်းတွေ အကြောင်း စိတ်မ၀င်စားခဲ့တာ
အတော် တောင် ကြာခဲ့ ပါပကောလား.. နှင်းဆီ ရေ..
မညီမမျှခြင်းတွေ ကိုရော..လို့.. မင်းက မေးချင်သေးလို့လား..
ကျမ က ဘာမှ ကို... စိတ်မ၀င်စားချင်တော့တာပါ...
မအိပ်မနေ ကျက်ခဲ့ တဲ့ ကာလတွေ အတွက်တော့..
ကျမ နောင်တ မရ ချင်ပါဘူး.. ကွယ်...
ပေါင်းကြည့်ခဲ့ ဖူးတယ်.. အဖြေ က ခပ်ဝေးဝေး ရယ်...
နှုတ်ကြည့်ခဲ့ ဖူးတယ်... မှား မှန်းတော့ သေချာ သိနေခဲ့ပါရောလား..
အစား ကို ကျွမ်းကျင်ဖို့ အတွက်.. လီပေါင်းတွေ ကျက်တဲ့ဆီ ပြန်သွား ရမယ်ဆိုတော့
ကျမ .. ထပ်ညွှန်း နဲ့ ... ဆခွဲ ကိန်း နဲ့ အစား ထိုးဖိုး ကြိုးစား ခဲ့မိသေးတယ်..
ရာရှင်နယ်.. အီရာရှင်နယ်တွေ နဲ့..
ရူး လိုက်ပုံ များ ဆို.....
ကျမ ကယ်ကူလေတာ ကို မုန်းတယ်..
ဖော်မြူလာတွေ လဲ မုန်းတယ်...
မရှိတဲ့ တည်ကိန်းတွေ အတွက်.. x တွေ y တွေ အစား ခဏ ထား ရတာလဲ မုန်းတယ်..
အဲဒီ ညီမျှ ခြင်း တွေ ရ အောင် ညှိတော့ ရော..
မညီမျှတာပျောက် သွားမယ် လို့ ဘယ်သူ တယောက်ပြောနိုင်သေးလို့ လဲ မနှင်းဆီ ရယ်..
ချစ်သူ တယောက် ကိုတောင်.. ရအောင် မဖျောင်းဖြနိုင်သူ လူညံ့တယောက် အတွက်..တော့..
ညီမျှခြင်းတွေ အကြောင်း... မေ့ကောင်းအောင်.. မေ့ လိုက်တာ.. ပဲ.. ကောင်းမယ်..
မေတ္တာတွေ ပုံပေးလို့ .. မေတ္တာနဲ့ဝေးရတဲ့ ပုစ္ဆာမျိုး ..
ခေတ်သစ် သင်္ချာဗေဒနဲ့ မဖြေရှင်းချင်ပါနဲ့ ကွယ်..
ကောဇောနီနီ တွေ ခင်းတဲ့ လမ်းမ နဲ့ မနီးချင်တော့တဲ့အကြောင်း မင်း သိသွားတဲ့အခါ..
ကျမ ကို .. ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ သူငယ်ချင်း ရယ်...
ဒီကမ္ဘာ ပေါ် မှာ.. ကျမ တယောက် တည်း နေလဲ.. ...နေတတ်ပါ့မယ်......။
၁၃ သြဂုတ် ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 8/15/2011 07:12:00 PM
Poya, ငါ မမေ့နိုင်သေးတဲ့
ကြည်လင်ခြင်း နူးညံ့ခြင်း.. ကြင်နာခြင်း.. ငြိမ်းအေးခြင်း..
မာန ကင်းစင်.. လင်းလဲ့.. တောက်ပစွာ...
Poya, ငါ မမေ့နိုင်သေးဘူး
မင်းရဲ့ ပါးလျားလျား နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ
အမြဲ ရီလဲ့ စွာနဲ့.. အပြုံးတွေ..
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်.. ကွေးညွတ်.. နှစ်လိုဖွယ်ရာ...
Poya, မြင့်မားလှ တဲ့
ကမ္ဘာ့ အလှပဆုံး တောင်တန်းတွေအကြား..
မင်း ကြီးပြင်း ခဲ့ ရတာနဲ့ ဆိုင်လို့လား...
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ် မှာ အရာရာ..
အရာရာ ဟာ .. မင်း အတွက်.. ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပဲ စေ..
Poya, ဒီလောက် ခွဲခြား ဆက်ဆံ ခံခဲ့ရတာတောင်မှ..
မင်း ဘယ်တော့မှ အပြုံး မပျက်ရအောင်..
ဆောင်ကျဉ်းပေးစွမ်းတဲ့ မင်း အမေ နဲ့ အဖေ..
Poya, မင်း အသံ မှာကိုက..
ကိုယ်ဟန်အမူ အရာ ကလဲ တည်ငြိမ် .. လေးနက်.. လို့..
ကလေး နှစ်ယောက် ကို လွမ်းလိုက်တာလို့..
မင်း ပြောလိုက်ပုံ ကလေးရဲ့နောက်မှာ..
မင်း ထက် ၇ နှစ် ငယ် တယ်ဆိုတဲ့
အိမ် သူကလေး အတွက် အလွမ်းတွေ လဲ..
ငါ တွေ့ ဖြစ်အောင် တွေ့ လိုက်ပါရဲ့..
မင်း မရှက် ပါနဲ့ .. Poya,
အဲဒါ ဘယ်လောက် ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ လို့..
အိပဲ့အိပဲ့.. ချီတက်နေတဲ့ ဆင်ကလေး အပေါ် မှာ..ပဲ..
ကလေးတွေ နဲ့ အတူရှိချင် တဲ့ မင်း ကို..
ငါ့ မောင်ကလေး တယောက် လိုချစ်မိခဲ့ရတာပါ..
မင်း နဲ့ အနီးအနား မှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့
ကမ္ဘာကျော် အကြမ်းဖက်သမား ကြီး အကြောင်းပြောနေတာတောင်
အပြုံး မပျက် ... လဲ့ နေတဲ့ မင်း ဟာ...
နောက် ၅ နှစ် လောက်ကြာလို့.
မင်း ရဲ့ တောင်တန်းတွေ ဆီမင်း ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါ...
မင်း ရဲ့ မျိုး နွယ်စုတွေ အတွက်..
ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းမလဲ လို့..
မင်း မေမေ တွေး သလို.. ငါ တွးနေမိတယ်.. Poya
ငါပြော ခဲ့ဖူးတဲ့.. Kite Runner အကြောင်းမမေ့ပါနဲ့ Poya
ငါ အမြဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Hazara တွေ အကြောင်း ထပ်ပြောပြပါ Poya
မင်း.. ယုံကြည်မှု အတွက်.. လူတွေ နှိမ့်ချတဲ့ အခါ.. မင်း အမြဲ ပြုံးနေပါ Poya
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ဆီက.. မျက်ဝန်း ညိုညို တွေ အကြောင်း မင်း အမြဲ သတိရပါ.. Poya
ငါ့ အတွက် တော့
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ အားလုံးဟာ.. အတူတူ ပဲ မို့..
Poya, မင်း.. ဟာ.. ငါ့ ရဲ့ ..ထာဝရ မောင်နှမ ဖြစ်တော့ မှာ.. အသေအချာပါ....
Posted by မမသီရိ at 8/13/2011 03:43:00 PM
အောက်စိုက် .. ခေါင်းငုံ့ .. အလွမ်းရုပ်လေ...
လွမ်းရော့ နိမိတ်.. ခပ်မဆိတ် နဲ့..
မိုးသက်လေထဲ ..ရွက်ကြွေ ၀ဲသလို..
တို့ရင်ထဲလဲ.. လွမ်းသဲနဲ့ ငို..
၂၉.၇.၁၉၉၀ (edited on 11 Aug 2011)
Posted by မမသီရိ at 8/11/2011 01:50:00 PM
ကျမ ရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကလေး
ကျမရဲ့ လင်းလက်တဲ့ ကြယ်ကလေး တပွင့်ဟာ သူပေါ့..
ကျမ ရဲ့ညတွေက သူနဲ့ပဲ အမြဲ လင်း ထိန်နေခဲ့တာ...
ပျော်သင့်သလောက် မပျော်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ရှင်တို့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ဖူးမှာ...
သူဟာ လူတကာ အတွက် သာမန်ကြယ်ကလေး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ ပါ့..
ဒါပေမဲ့ ကျမ အတွက်ကတော့ သူသည် သာ အရာရာ..
သူ့ မှုန်မွှားမွှား အလင်းရောင်ကလေးနဲ့ ပဲ
ကျမ လမ်း တွေ ကို သူ အလင်းပေးခဲ့တာ..
သူ့ အင်အားဖြည့် အလင်းရောင်ကလေး ကြောင့်ပဲ..
ကျမရဲ့ နေ့တွေ ရက်တွေ တောက်ပ ရှင်သန်ခဲ့တာ..
ကမ္ဘာမြေပြင်က ပန်းတွေ မွှေးခဲ့တာ သူ့ အလင်းကြောင့်ပါပဲ လို့
ကျမ တီး တိုးရေရွတ်တော့
ကြယ်ကလေး က ရှက်ပြုံး ပြုံးတယ်..
ငှက်ကလေး တွေ တေးဆို ဖို့ အတွက်..
သူ့ ရဲ့ အနွေးဓါတ် လိုတယ် လို့ ကျမ မှတ်ချက်ပြုတော့
ကြယ်ကလေး က မယုံ သလို ကြည့်တယ်..
ဒီလောက် အဝေးကြီး ကနေ ..
ကျမ ကဗျာတွေ သူ့ ကြောင့် ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ် ဆိုတော့
သူ အကြောက် အကန်ပဲ ငြင်းတော့တယ်..
တသက်လုံး ပြုံးခဲ့ရတာ နည်းတယ်ဆိုတဲ့ ကြယ်ကလေး..
နက်ဗျူလာ က အကျယ်ကြီး ရယ်..
မင်း မရီလို့ ငိုမယ့်သူ ဆို.. ကျမ တယောက်ထဲ ပဲ ရှိနေမှာ မဟုတ်လား..
စကြာဝဠာကြီး ထဲ ပျံ့လွင့်ပဲ့တင်လာမဲ့
ကျမ ရှိုက်သံ တွေ မင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမယ် ထင်လို့လား...
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး.. ရီမော လိုက်ပါ့ ကွယ်..
ချစ်လိုက်ရတာ ကြယ်ကလေး ရယ်..
သတိရတဲ့ အကြောင်းတွေ မင်းဆီရောက်ဖို့
အလင်းနှစ် တွေအတော် အတန် ဖြတ်သန်း ရပေဦးမယ်..
ကျမ ရဲ့ လွမ်းမောခြင်းတွေ မြေကမ္ဘာ မှာ ငြိတွယ် ရှင်သန်နေတဲ့အခါ..
နှင်းဆီဖြူတခက် ကိုက်ချီထားတဲ့ ခိုကလေး တကောင် ကျမဆီ ရောက်အောင်ပို့ပေးပါ..
ကမ္ဘာချီ ကွားခြားလွန်းတဲ့ ခရီးမိုင်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ..
ကြယ်ကလေး ... မင်း.... ကျမ ရင်ထဲ အမြဲ ရှိနှင့်ပြီးမို့..
ကျမ ရဲ့ အနမ်းတွေ .. နှင်းဆီပွင့်ချပ်ကလေး နဲ့ ထုပ်..
အဲဒီ ခိုကလေး ပဲ ပြန်အပို့ ခိုင်းမလို့..
မပုပ် မသိုးခင်... မင်း..ကို နမ်း ခွင့် ရစေချင်...လိုက်တာ. ဆို..။
၆ - ၁၃.၇.၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 7/29/2011 10:51:00 PM
အတ္တ တီစူပါ... မာန ယူရီးယား..
အားကူလို့ပေါင်း.. သြဇာတွေ ထပ်လောင်းတာတောင်မှ..
မိုး ပဲ မမှန်တာလား..
တလွဲ ပေါက်လာလိုက်တာများ ဆို...
ပိန်း ပိတ်အောင် တောထ.. လို့...
မင်း ကို.. ချစ်ရတဲ့ အချစ်တွေ သာ.....။
ခရီးထွက်ရမှာမို့ schedule လုပ်ပြီးတင်ထားခဲ့တာပါ .. လာလည်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ..
Posted by မမသီရိ at 7/21/2011 11:26:00 AM
ခုန ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာ ဒီတယောက်
ကျွန်တော်ချစ်နေတာ နောက်တယောက် တဲ့..
ကိုယ့် ဘ၀လေး ထဲက သူ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီ..
ဘယ် အရာမှ မတည်မြဲ ပါလားနော်..
အော်.. အနိစ္စ .. အနိစ္စ.. အနိစ္စ...
နောက် တယောက် ကောက်ချစ်မယ် ဆို..
ချစ်လို့ ဖြစ်မှာ တွေ တပုံ တခေါင်း ပေါ့..
ခက်နေတာ က ဒီ တယောက်ထဲ စွဲစွဲ မြဲမြဲ ချစ်နေမိတာ
ဆင်း ရဲ ခြင်းမကင်း ၀ဋ် ကျင်းထဲ ခုံ ဆင်းလိုက်ပုံ များ ဆို..
အော်... ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ... ဒုက္ခ....
နေမင်း တစင်း ပွင့်တဲ့ နေ့ တွေမှာ..
ငါ ဟာ ငါ မဟုတ်..ငါ့ ကိုယ် ငါ မပိုင်..
ဆိုင်တာတွေ အကုန်လုံး သူကြောင့်ချည့်
အတွေး တွေ ချည်တိုင် ပြန်မရောက်တာလဲ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ
အစိုး မရခြင်း.. မပိုင်ဆိုင်ခြင်း မကင်းလိုက်တာများ ဆို...
အော်.. အနတ္တ.. အနထ္တ... အနထ္တ....။
Note: မနက်ဖြန် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ဆိုတော့..
Posted by မမသီရိ at 7/14/2011 11:09:00 AM
ညီမလေး သို့..... စကားပွင့်အကြွေတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့နေရာ..
(အော).. ကုသိုလ် ကံကိုက
ကိုယ်က ချစ်ရဖို့ပဲ ဖြစ်လာတာ
အချစ်ခံ ရသူတွေ လိုက် လိုက် မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့လား..
တနေ့နေ့ တချိန်ချိန် တနေရာရာ
မင်း ကို အမှန်တကယ် ချစ်လာသူလေး တယောက်
မင်း ရှေ့မှောက် ရောက်မလာဘူး လို့ ဘယ်သူ ပြောမလဲ
လွမ်းစရာ ရှိတာ လွမ်းလိုက်ပါ
နာစရာ ရှိတာ နာလိုက်ပါ
ကြေကွဲ စရာ ရှိနေတာ အကြွေးမထားကြေး
ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေရသတဲ့လား ညီမလေး..
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးကို ရှိနေတုန်းပဲ တဲ့လား ညီမလေး..
အချိန်တွေ ဟာ နှမျောစရာ ကောင်းလွန်းတယ်
ငါတို့ အလည်အပတ်ရောက်တာ ကာလ က တိုတို ရယ်..
ဘ၀ ဟာ.. အချစ်တခု တည်း မဟုတ်မှန်း
ပြီး.တော့.. နေမင်းကြီးနဲ့လွဲခဲ့ပြီး လို့ ၀မ်းနည်းနေမယ်ဆို
ကြယ်တာရာတွေ နဲ့ ထပ်ဝေးရမဲ့ အကြောင်း
ကောင်းကောင်း သိလာမဲ့ တနေ့.. မှာ....
ဒီကမ္ဘာ ကြီး ဟာ.. ပျော်စရာတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေကြောင်း..
ဘယ်သူတဦးတယောက် မောင်းခတ် မကြေငြာ သော်လည်းပဲ
မင်း.. သိလာမှာ အသေအချာ...
အဆုပ်လိုက် အခိုင်လိုက် မွှေးနေတဲ့နေရာ..မှာ
ငါ ရှိနေနှင့်ပြီး မို့...
အလွမ်းတွေ အကြောင်း ကော်ဖီ ထဲ ထည့်ဖျော်သောက်ကြဖို့
ငါတို့ အဲဒီမှာ ဆုံ ကြရအောင်ပါ.....။
Posted by မမသီရိ at 7/11/2011 09:35:00 AM
အသဲ ကို စံနစ်တကျ ကွဲရအောင်လို့ဆိုပြီး
စဉ်းစား လိုက်ရတာများဆို.. တနေ့ နဲ့ တည...
စီးကရက် ကို မီးညှိ .. စတိုင်အပြည့်နဲ့ ကွဲ ရမလား...
ရှန်ပိန် တငုံ .. ရီဝေ မှိုင်းမှိုင်း မှုန်စွာ အသဲကွဲ ရမလား..
ဆံပင် ခွေခွေ လိပ်လိပ်.. မဖြီး မသင်..
ရှုပ်ပွ အောင် တမင် ဆင် လို့ ကွဲ လိုက်ရမှာလား..
မျက်တောင် ကလေး ပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ်..
မျက် ရည် ဝေ့ဝေ့ ကျလု စပ်စပ်.. ငို့မဲ့မဲ့ ကလေး နဲ့ များ ကွဲ ရမလား...
ကြွက်လျှောက်ပြေးသံ အော်အောင် နှိပ်လို့ ..
အဆက်မပြတ်တီးပေးရင်း .. ကွဲလိုက်ရတော့မလား..
ဒါမှမဟုတ်..ပဲ... ရှေ့တွေ့ တဲ့ ခဲ တလုံး
ခြေသဲကလေး တချောင်း အဆုံးခံ ..ကန်ပြီး အသဲ ကွဲ ပြလိုက်ရမလား...
ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲက ကောင်မလေးတွေလို
ရေချိုးခန်းထဲ . ရေပန်းအောက်မှာ ၀င်.ခို.. .
ခေါင်းမော့ ပြီး.. အော်ဟစ် .. အသဲ ကွဲ ပစ် ရမှာလား...
ခေါင်းတွေ ရှုပ်ပါပေါ့ ..
ဘေးနား က ကတုံး ဆံတောက်မကလေး .. ကော်ဖီ ဖျော်ပေးခိုင်းလိုက်ပြီး ခဏ....
အိတ်စ်ပရက်ဆို.. ကော်ဖီမွှေးမွှး တခွက်နဲ့ ပဲ.. အသဲ ကွဲ ခြင်း အမှု ကိစ္စ ပြီး ဆုံးသွားရလေတော့တယ်....။
Posted by မမသီရိ at 7/09/2011 04:31:00 PM
ရေတွင်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်ထိ တူးရမှာလဲ ကွယ်...
တောင်တွေ ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် တက်ရမှာလဲ ကွယ်...
ဘယ်လို အရာတွေများ ထပ်ပြီး ပေးဆပ်ရမှာလဲ ချစ်သူ ရယ်...
ရေကြည်တွင်း တွေ ရာ ထောင်မက ကိုယ် တူးရလဲ ဖြစ်ပါတယ်..
တောင်တန်းတွေပေါ် မိုင်ထောင်ကျော် ထိ ကိုယ် တက်ရလဲ ဖြစ်ပါတယ်..
မင်း... နဖူး ကလေး တချက် နမ်းခွင့် ရဖို့ ရယ်..
မင်း ဆံ ပင်ကလေးတွေ့.. ထိတွေ့ ခွင့် ရဖို့ရယ်....
မင်း လက်ကလေးတွေ ပါးမှာ အပ်ထား ခွင့် ရယ်....
မင်း ရင်ခွင်ထဲ .. ခဏ လောက် မှေး စက်ခွင့် ကလေး ရယ်....
ခက်လိုက် တာများ ဆို...
ကြယ်တံခွန်တွေ လိုက်.. လိုက် .. ဖမ်းတာ မှ လွယ် လိမ့်အုံး မယ် ထင်ပါတယ်.....။
Posted by မမသီရိ at 7/02/2011 12:41:00 PM
လွန်းတင်ထားခဲ့ တဲ့ ကြိုးပေါင်း က ၂၀၀၀ ကျော်.မို့.
၅၂၈ ပင် နဲ့ ချည် ထားခဲံ့
နောက်ထပ်ကြိုး ပေါင်း ၁၅၀၀ .. ထပ် ပြီး အားဖြည့်ထားမိမှတော့
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဖြည် ချင်လဲ ရတော့မယ် မထင်..
ကော်ဖီ တူတူ သောက်ချင်တယ်
အဖျား နဲ့ချမ်း နေတဲ့ အခါ ဖက်ထားပေးမယ်
အိမ်အလွမ်း စိတ် တွေ တူတူ မျှဝေလို့..
နေညို ချိန်အတွေးတွေ ဖမ်းယူ စုတ်ချက်တင်ရင်း..
ညသန်းခေါင်ကျော် .. ကဗျာ တပုဒ် ရေးတဲ့အခါ ..
မောင့် ကို နှိုးပြီး ဖတ်ခိုင်း ရင် စိတ်မဆိုးပါနဲ့...
လူတွေက ရူးလိုက်တာလို့ ပြောရင် လဲ ကျမ က ပြုံးပဲ ပြုံးနေလိုက်မှာ...
အချစ်တွေ သေဆုံး တယ် ဆိုတာ မယုံ ကြည်သူမို့..
ဓား ထက်ထက် တွေ အလုပ်ပို ရှာ ရင်း မသွေးပါနဲ့ တော့ မောင်.....။
Posted by မမသီရိ at 5/25/2011 05:39:00 PM
ဒီ ကနေဒီယံ အမျိုးသမီးကလေးကို နှစ်သက်မိတာ နှစ်တွေ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ..။
ကျက်သရေရှိလှတဲ့ သူ့ မျက်နှာ၊ ချစ်စဖွယ် သူ့ အပြုံး.. ၊ နှာခေါင်းသံ ကလေး သဲ့သဲ့ နဲ့ သူ့ အသံ ကို ဘယ်လို စွဲ မက်မိမှန်းမသိ..။ သူ့ ထွက်သမျှ အခွေတွေ လဲ ၀ယ်ဖြစ်တာပါပဲ..။
သူ့ သီချင်းတွေ အတော်များများ ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း ကြိုက်ပါတယ်..။
စိတ်တွေ ညစ်တဲ့အခါ တိုင်း... စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာတိုင်းမှာ နားထောင်ဖြစ်တာ သူမကလေးရဲ့ သီချင်းတွေပါ.. ။ သီချင်းရေးတာရော.. ဆိုတာရော.. တီးတာပါ ရတဲ့ သူမရဲ့ ပါရမီ ကို အားကျမိတာလဲ အခါခါ..
ဒီသီချင်းက.. နှစ်သက်မိသာ သီချင်းများထဲ တပုဒ်ပါ............။
Songwriters: Lange, Robert; Twain, Shania;
[- From :http://www.elyrics.net/read/s/shania-twain-lyrics/you_re-still-the-one-lyrics.html -]
these lyrics are last corrected by kendal gunier
Posted by မမသီရိ at 5/21/2011 06:03:00 PM
မမြင်ရတဲ့ ကြိုးတချောင်း ပြတ်သွားတဲ့အခါ..
တော်လဲ သွားခဲ့ပေါ့ ဒီမြေကမ္ဘာ...
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ညဉ့်ငှက်တို့ ထပျံ..
ခရမ်းရောင် မှိုင်းလို့ဖြင့် လွမ်းကျန်......
မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲလို့ စွင့်ကားတဲ့ နှင်းဆီရယ်..
တောင်စောင်းပေါ်က အလေ့ကျ နှင်းဆီ ရိုင်းရယ်...
ခံစား တတ်ခဲ့ရင်ဖြင့်..အလှချင်း က အတူတူ ပါပဲ..
မင်းတမ်းတဖူးတဲ့.. အပြာရောင် ကြယ်ဟာ..
မင့် ဘယ် ရင်အုံ ပေါ်က
အဖြူရောင် နှင်းဆီ ရိုင်းကလေးလောက်
မနွေးထွေးစေနိုင်မှန်း.. မင်းသိလာမဲ့ တနေ့ မရောက်ခင် ကလေး မှာပဲ.....
တောင်တကြော... လင်းပြာနေအောင် ပွင့်သော..
ခမောင်းတော.. တွေ ရဲ့ အလယ်.....
မမြင်ရတဲ့ ကြိုးတချောင်း..ပြတ်ခဲ့သော အခါ...
မင်း ခို နားမယောင် ပြုခဲ့ဖူးသော... ရင်ခွင်ငယ်ကလေး တခု... ဟာ........ ။
၁၇ မေ ၂၀၁၁
Posted by မမသီရိ at 5/17/2011 11:00:00 AM
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ ၁ ဂဏန်းတွေနဲ့ ထူးခြားနေတဲ့ နှစ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ဖုန်းရွှေ ပညာအလိုအရ ဒီနှစ်ကို ငွေအိတ်နှစ် လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဇူလိုင်လဟာ တနင်္ဂနွေ ၅ ရက်၊ စနေ ၅ ရက် နဲ့ သောကြာ ၅ ၇က်စီ ရှိနေပြီး ခုလို မျိုး တိုက်ဆိုင်ဖို့ အတွက် ၈၂၃ နှစ်ကြာမှ တစ်ကြိမ် တွေ့ နိုင်ပါသတဲ့။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ထဲမှာ ပဲ ၁ ဂဏန်းတွေ ဆင့်နေတဲ့ နေ့ စွဲ ၄ ကြိမ် ရှိပါတယ်
၁-၁-၁၁ ။ ၁၁-၁-၁၁။ ၁-၁၁-၁၁ နဲ့ ၁၁-၁၁-၁၁ ရက်တွေ ပါပဲ ..
နောက်အထူးခြား ဆုံး အချက်ကတော့ မိမိမွေးတဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် ခုနှစ် ရဲ့ နောက်ဆုံး ဂဏန်း နှစ်လုံး နဲ့ မိမိ ရဲ့ ခု ရောက်ရှိနေတဲ့ အသက် ကိုပေါင်းလိုက်ရင် ၁၁၁ ရပါတယ်.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတိုင်း အတူတူ ဖြစ်နေတဲ့ အချက်ပါ.. (ဥပမာ ၁၉၈၈ မှာမွေးတဲ့သူတယောက်က ခု ၂၃ နှစ် ရှိပြီး - ၈၈ နဲ့ ၂၃ ပေါင်းရင် ၁၁၁ ရပါတယ်..) ..
ဖော်ဝါ့မေးလ်က ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တခုပါ။
This is kind of interesting ..... read it all and do the birthday calculation!
Posted by မမသီရိ at 5/11/2011 01:28:00 PM
မီ... သို့မဟုတ် ... နွေးထွေး လင်းလက်ခြင်းများစွာ.....
ညီမလေး သို့..... စကားပွင့်အကြွေတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေတ...